Arag Sawirrada: Madaxweyne XASAN iyo boqorka Japan oo ku kulmay Tokyo - Caasimada Online
Home Warar Arag Sawirrada: Madaxweyne XASAN iyo boqorka Japan oo ku kulmay Tokyo
Arag Sawirrada: Madaxweyne XASAN iyo boqorka Japan oo ku kulmay Tokyo
Tokyo (Caasimada Online)-Madaxweynaha Soomaaliya oo maalintii seddexaad ku sugan caasimada Japan ee Tokyo ayaa maanta oo Khamiis ah la kulmay boqorka dalkan Japan Akihito.
War-qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in labada nin ay ka hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay xaalada Soomaaliya.
Boqorka Dalka Japan ayaa u sheegay Madaxweynaha Soomaaliya inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda Soomaaliya isla-markaana ballan-qaaday in Dowladda Japan ay juhdi xoog leh gelin-doonto sidii Soomaaliya mar kale u noqon lahayd wadan xasilooni buuxda ka jirto.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaaa marka hore uga mahad-celieyey boqorka Japan tageeradda Dowladda Japan ay ku bixiso Soomaaliya iyo sida wanaagsan ee Madaxweynaha iyo wafdigiisa loogu soo dhaweeyey dalka Japan.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga tacsiyeyay dhibaatada duufaantii ku dhufatay gobolka fukushima oo ay shalay ku beegneyda sannad-guuradii Seddexaad ee musiibadii dhacday.